स्नातक विवरण od होज विश्वविद्यालय
होजस् स्नातक स्वागत छ !!!
तपाईको डिग्री आर्जन गर्ने र तपाईको भविष्यमा अर्को चरण लिने बधाई छ। हामी तपाईंहरु प्रत्येक को लागी उत्साहित छौं, र गर्व गर्छौं! जबकि यो अध्याय अन्तमा ड्रइंग हुन सक्छ, यो केवल नयाँ अवसर हो तपाईंको नयाँ डिग्रीले तपाईंको अगाडि यात्राको लागि प्रदान गर्ने अवसरहरूको लागि सुरूवात मात्र हो।
हामी तपाइँलाई यस बखत तपाइँलाई हेर्दै अगाडी हेर्छौं St१ औं समारोह समारोह!
Hodges विश्वविद्यालय स्नातक शुरू
मिति: आइतवार, जून २०, २०२१
समय: बेलुका :4:००
स्थान: हर्ट्ज एरिना, ११०० एभरब्लेड्स पार्कवे, एस्टेरो, फ्लोरिडा 11000 33928 XNUMX २।
जान्नुहोस् तपाईं जानु अघि जानकारी
प्रत्येक वर्ष, स्नातक समारोह सबैभन्दा महत्वपूर्ण शैक्षिक घटना होज विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरू र सम्पूर्ण होज परिवारको लागि हो। यो वर्षौंको कडा परिश्रम, लगनशीलता, र विद्यार्थी र परिवारका लागि व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको चरम सीमा हो। यो जस्तो दिन मनाउनु पर्छ। हाम्रो St१ औं समारोह समारोह तपाइँको शैक्षिक उपलब्धि को उत्सव साथ पारंपरिक अवलोकन सम्मान हुनेछ। यस बर्षको स्मारक समारोह कुनै पनि विद्यार्थीको लागि स्नातक को लागी खुला छ जुन 6th औं, २०१ to बाट मे २, २०२१.
तल, हामीले एउटा स्नातक चेकलिस्ट प्रदान गरेका छौं जुन तपाईलाई स्नातक दिनको लागि तयार गर्न र स्नातक समारोह सम्बन्धी प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि तयार पारिएको हो। यो चेकलिस्टले औपचारिक स्नातक पूर्वाभ्यासको ठाउँ लिन्छ। कृपया अतिरिक्त जानकारीको लागि प्रत्येक सेक्सनको समीक्षा गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई जून २० को लागि तयार हुन आवश्यक पर्दछth स्नातक दिन।
१. सबै डिग्री आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्
अन्तिम विद्यार्थीको अन्तिम सत्रमा इन्ट्यान्ट टु ग्रेजुएट फाराम पूरा गर्नु प्रत्येक विद्यार्थीको उत्तरदायित्व हो। कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले विद्यार्थी अनुभव सल्लाहकारसँग जाँच गर्नुभयो कि यो प्रमाणित गर्न कि तपाईंले विश्वविद्यालयको क्याटलगमा उल्लेख गरे अनुसार सबै विश्वविद्यालय डिग्री आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभएको छ। यदि तपाईं सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्न भने, सबै डिग्री पूरा नभएसम्म तपाईंको डिग्री प्रदान गरिने छैन। कृपया यो याद राख्नुहोस् कि सबै आवश्यकताहरू पूरा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नु तपाईंको दायित्व हो।
२. तपाईंको क्याप, गाउन, र Tassel अर्डर गर्नुहोस्
स्नातक समारोहमा भाग लिन चाहने बिद्यार्थीहरूले पछि ग्रेजुएशन रेगल्या (क्याप, गाउन र टेसल) किन्नु पर्छ मई 21, 2021। विद्यार्थीहरूलाई समयमै डेलिभरी सुनिश्चित गर्नका लागि यस समयसीमा भन्दा अघि नै आफ्नो रिगलिया अर्डर गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। यो खरीद स्नातक शुल्क को एक हिस्सा को रूप मा शामिल गरीएको छैन। यी वस्तुहरू अनलाइन अर्डर गर्न सकिन्छ हरफ जोन्स वा स्नातक समारोह समारोह मा व्यक्ति मा।
Hon. सम्मान कर्ड, हुड, र पिन
यी मानद वस्तुहरू फोर्ट मायर्स क्याम्पसमा छनौटको लागि उपलब्ध छन्, वा तपाईं आफ्नो साथी वा परिवारको सदस्यलाई तपाईंको लागि डोरी लिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई सुरू दिनमा लिन सक्नुहुन्छ।
Order. आदेश स्नातक फोटोग्राफी
होज विश्वविद्यालयले हाम्रो स्कूल र / वा सुरुवात समारोहको लागि आधिकारिक सुरुवात फोटोग्राफरको रूपमा GradImages भाडामा लिएको छ। कार्यक्रमको दौरान प्रत्येक स्नातकको तीन फोटो लिइन्छ:
जब तपाईं स्टेजमा आफ्नो बाटो बनाउनुहुन्छ।
जब तपाईं स्टेजको मध्यमा राष्ट्रपतिको हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ।
तपाईं मञ्चबाट बाहिर निस्केपछि।
तपाईंको प्रमाणहरू समारोह पछि hours 48 घण्टा पछि अनलाइन हेर्न तयार हुनेछ। जे होस् अर्डर गर्न कुनै बाध्यता कहिले पनि भएन, तपाईले participation 20 वा अधिकको अर्डरको २०% छुट बचाउनुहुनेछ तपाईको सहभागिताको लागि। प्रि-रेजिष्टरिंग GradImages को साथ तपाईंको सम्पर्क जानकारी अप-टु-डेट छ भनेर निश्चित गर्नका लागि सरल तरीका हो, ताकि तिनीहरूले तपाईंको प्रशंसनीय प्रमाणहरू जति सक्दो चाँडो प्रदान गर्न सक्दछन्। तपाईंको सुरूवात प्रमाणहरूको लागि प्रि-रेजिस्टर गर्न, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् GradImages
तपाईंको स्नातक र पूर्व-दर्ता सहभागिताको अंशको रूपमा, GradImages ले तपाईंलाई ईमेलहरू, मेल पेपर फोटोग्राफी प्रमाणहरू पठाउँनेछ, र वैकल्पिक पाठ सन्देश सूचनाहरू पठाउन सक्दछ।
सम्भावित स्नातकहरू पास गर्न र सबै डिग्री आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ2सक्छ, 2021, क्रम कार्यक्रम शुरू गर्न को लागी।
कृपया तपाइँको सबै जानकारीहरू रजिस्ट्रार अफिससँग अद्यावधिक गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको डिप्लोमामा छापिएको विवरणहरू तपाईंको लागि हामीसँग फाईलमा भएका जानकारी द्वारा निर्धारण गरिन्छ। डिप्लोमा विद्यार्थीलाई फाइलमा ठेगानामा पठाइनेछ।
हामी सबै बिद्यार्थीहरुलाई अनुरोध गर्दछौं कि उनीहरूको खाता स्थिति जाँच गर्न सुरु हुनु भन्दा पहिले विद्यार्थी खाताको कार्यालयको साथ जाँच गर्नुहोस्। कृपया सचेत रहनुहोस् कि विश्वविद्यालयको साथ सबै वित्तीय दायित्वहरु पूरा गर्न असफल भएमा तपाईलाई समय समयमा डिप्लोमा र / वा ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ।.
विद्यार्थी जानकारी स्नातक
आगमन र विधानसभा
कृपया दिउँसो १::1० भन्दा पहिले पुग्नुहोस् योजना निर्देशनहरूको समीक्षाको लागि।
आगमनमा, स्नातकहरू हर्ट्ज अखाडाको पूर्व प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्न सक्दछन्।
प्रत्येक स्नातक चरणको टेबुलमा उसको / उनको नाम कार्ड लिनेछ। कार्डहरू यसमा तपाईंको कानूनी नामको साथ मुद्रित छन् र शुरू कार्यक्रममा छापिएको कुरासँग मेल खान्छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो कार्ड प्राप्त गर्नुभयो, कृपया फोटोग्राफरको लागि कार्डको पछाडि सम्पर्क जानकारी खण्ड पूरा गर्नुहोस्।
यो कार्ड तपाईले बोक्नुपर्नेछ जबसम्म यो स्टेज पार गर्ने अघि उद्घोषकलाई दिइनेछ।
कार्डमा तपाइँको सिट तल्लो दाहिने कुनामा पनि सूचीबद्ध हुनेछ।
ग्रेजुएट सीट या त धारा ११ 115, ११116, वा ११117 वर्णमाला अनुसार र कार्यक्रम द्वारा सीट सीट तोकिनेछ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि आफ्नो सिटमा पुग्न तपाईंले माथिल्लो तलामा हिंड्नुपर्नेछ। यदि यो समस्या हो भने कृपया विश्वविद्यालय स्टाफलाई कमेन्मेन्ट दिन भन्दा पहिले थाहा दिनुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं जुलूस शुरू गर्नु अघि तपाईंसँग तपाईंको नाम कार्ड छ।
अतिरिक्त क्याप्स र गाउनहरू समारोहमा ल्याइन्छ यदि तपाइँलाई बदल्नको लागि आवश्यक छ भने कृपया तपाइँको मुद्दा छ भने एक विश्वविद्यालय स्टाफ सदस्यलाई हेर्नुहोस्। कृपया नोट गर्नुहोस् कि समारोहमा सीमित मात्रामा थप क्याप्स र गाउनहरू हुनेछन्; यदि त्यहाँ तपाईंको क्याप र / वा गाउनमा are दिन भन्दा बढि समस्याहरू छन् वा समारोह भन्दा पहिले, कृपया फोर्ट मायर्स क्याम्पसमा एक सहायक सेवाको अफिससँग कुरा गर्न एक प्रतिस्थापन क्याप र / वा गाउनको बारेमा आउँनुहोस्।
पोशाक कोड र आचरण
कृपया चम्काउनको लागि तयार हुनुहोस्!
तपाईले स्नातक समारोहको अवधि को लागी पूर्ण शैक्षिक पोशाक (क्याप, गाउन र सम्मान कर्ड वा मास्टरको हुड, यदि लागू भएमा) लगाउनु पर्छ।
स्नातकहरु हर्ट्ज एरेनामा आए पछि आफ्नो क्याप र गाउन लगाउँनेछन्। स्टाफ मद्दत गर्न उपलब्ध हुनेछ।
कृपया परिवार, साथीहरू वा पाहुनाहरूसँग सबै बहुमूल्य चीजहरू र व्यक्तिगत आईटमहरू छोड्नुहोस्।
लुगा परम्परागत रूपमा गाउनको साथ लगाइन्छ:
पुरुष - कलर, गाढा स्ल्याकहरू, प्लेन डार्क टाई, र कालो जुत्ताको साथ शर्ट।
महिला - गाढा पोशाक, वा स्कर्ट वा प्यान्ट र ब्लाउज, कालो, बन्द-toed जुत्ता संग। उच्च-हिलको जुत्ता सिफारिस गरिदैन। फ्लिप फ्लप, टेनिस जुत्ता, र सेतो जुत्ता लगाउन हुँदैन।
यदि आवश्यक भएमा, कृपया तपाईंको गाउनलाई चिसो फलामको साथ प्रेस गर्नुहोस्।
टोपी समतल दाँया पट्टि झुण्डिएको फराकिलोसँग समतल हुनुपर्छ। स्नातकहरू होशियार हुनुपर्छ कि जब फोटोग्राफहरू लिइएको थियो भने यसमा टेस्सेललाई हस्तक्षेप नगर्नू।
यदि लागू भएमा, सम्मान कर्डहरू घाँटी वरिपरि लगाउनु पर्छ जसमा हरेक छेउबाट तल झुण्डिएको छ। सम्मान कोरिड विश्वविद्यालय नीति अनुसार वितरण गरिनेछ:
Summa कम laude को लागी चाँदी र रातो (3.90 ०- ;.० GGPA);
म्याग्ना कम लाउडका लागि डबल रेड (.3.76--3.89 G GGPA); वा
सह लाउडको लागि डबल रजत (3.50. G०-..3.75 G GGPA)।
विश्वविद्यालयले अर्थपूर्ण, मर्यादित समारोहको योजना बनाउन र सञ्चालन गर्न प्रत्येक प्रयास गर्दछ। तपाईंको शैक्षिक उपलब्धिहरूको सम्मान सम्मानका साथ अवलोकन गर्नुपर्दछ। अव्यवस्थित आचरण, उच्छृंखलता, वा मदिरा वा ड्रग्सको उपस्थिति तत्काल हटाउनको लागि आधार हुनेछ र तपाईंको डिप्लोमा युनिभर्सिटीले पछाडि राख्न सक्छ।
स्नातकहरुलाई समारोह सुरु हुनु भन्दा पहिले शौचालय सुविधाहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ, किनकि समारोह सुरु भएपछि तपाईलाई आफ्नो सिट छोड्न अनुमति दिइने छैन।
स्नातकहरू कार्यक्रम भर मा बस्नु आवश्यक छ।
स्नातकहरु को भाग ११ 115, ११,, वा ११ in मा राखिएको छ कि तिनीहरु चरणमा हिड्नेछन्। यो अर्डर एक साथ शुरू हुन्छ कार्यक्रमको सुरू कार्यक्रममा सूचीबद्ध गरिएको छ, वर्णमाला र डिग्री द्वारा।
तपाईंलाई अपरान्ह at: the० मा भुइँ क्षेत्रमा जानको लागि सोधिनेछ तपाईं चरण पछाडि सकेसम्म धेरै पows्क्तिहरू बनाउनुहुनेछ। जब जुलुस शुरू हुन्छ, विद्यार्थीहरूले सकेसम्म छिटो तल्ला क्षेत्रमा जान जारी राख्नेछन्। ढिलाइ पुग्ने विद्यार्थीहरूलाई सबै अन्य स्नातकहरूको पछाडि राखिनेछ र उही डिग्री र प्रमुख कमाई गर्नेहरूको छेउमा बस्न सकिँदैन। कृपया समयमै पुग्न निश्चित हुनुहोस्।
ग्रान्ड मार्शल बोर्डका अध्यक्ष
कम्मेन्मेन्ट प्रोग्राम प्रदान गरिनेछ जब तपाईं मुख्य भुइँमा प्रवेश गर्नुहुन्छ।
अखाडाको उत्तरपट्टि मुख्य फ्लोर प्रविष्ट गर्नुहोस्। सिटहरूको पछाडिको सबै मार्गमा अगाडि बढ्नुहोस्, दायाँ घुम्नुहोस्, र दायाँ फेर्नुहोस् केन्द्र गल्लीमा फेरि।
समारोह समारोह विवरण
विद्यार्थी र अतिथि वक्ता समाप्त भएपछि, राष्ट्रपतिले सबै उम्मेद्वारहरूलाई मास्टर डिग्रीको लागि अनुरोध गर्न अनुरोध गर्नेछन्।
मास्टर डिग्री त्यसपछि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित गरिनेछ।
एक पटक यो भाग समाप्त भएपछि, तपाईंलाई त्यसपछि चरण क्षेत्रमा पठाइनेछ जहाँ तपाईं एक पटकको चरण पार गर्नुहुनेछ एक पटकमा पूर्व-निर्धारित व्यक्ति हेर्न।
कृपया तिनीहरूलाई तपाईंको नाम कार्ड अनुहार दिनुहोस् ताकि ऊ / उसले तपाईंको नाम पढ्न सक्दछ।
जतिसक्दो चाँडो तपाईं आफ्नो नाम कार्ड बन्द गर्नुहुनेछ, चार्टमा संकेत गरेझैं चरण पार गर्नुहोस्।
डा। मेयरबाट डिप्लोमा कभर स्वीकार गर्न सही तरिका तपाईंको बाँया हात हो। त्यसो भए तपाईको दाहिने हातले हात मिलाउनुहोस्।
यो त्यहाँ हुनेछ जहाँ फोटोहरू मध्ये एक लिइएको छ त्यसैले कृपया हाँस्न नबिर्सनुहोस्।
यस ग्रान्ड मार्शलले तपाईंको तास्लो फेर्नेछ र तपाईंको हात मिलाउनेछ।
पूर्व छात्र नेटवर्क एक उपहार दिन्छ, र संकाय तपाईं बधाई दिनुहुन्छ तपाईं आफ्नो सीट मा फर्कनु भन्दा पहिले।
कृपया बस्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो सिटमा फर्कनुहुन्छ।
स्नातक, सहयोगी, र प्रमाणपत्र स्नातकहरूले समान प्रक्रियाहरू अनुसरण गर्नेछन्।
यदि तपाईं सेक्सन बीमा विराजमान हुनुहुन्छ भने, कृपया दिईएको निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् स्टेज पहुँच गर्न र आफ्नो सीटमा फर्कनुहोस्।
होज विश्वविद्यालयका स्टाफले तपाइँलाई थाहा दिन्छ कि तपाइँको प row्क्ति बाहिर निस्कन सक्छ।
कृपया स्टेजको पछाडि क्षेत्रमा पुग्दा कृपया रोक्नुहोस् किनकि अन्य स्नातकहरूले पनि छोड्न खोजिरहेका छन्।
तपाईको परिवार र साथीहरूसँग भेट्ने स्थानको पूर्व-योजना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईं चरणको पछाडि दुवैपट्टिबाट मैदानबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ।
प्रत्यक्ष सुरुवात समारोह जुन २०, २०२१ मा साँझ :4:०० बजे हाम्रो गृह पृष्ठमा हेर्न सकिन्छ।
हर्ट्ज एरेनाका लागि दिशाहरू
उत्तरबाट: I-75 लिनुहोस् १२it (एलिको रोड) निस्कनुहोस्। पूर्वमा Alico रोडमा बेन हिल ग्रिफिन पार्कवे सम्म पुग्नुहोस्। बेन हिल ग्रिफिन लिनुहोस् लगभग 128. miles माईल दक्षिणमा। एरेना दायाँ-पट्टि अवस्थित छ।
दक्षिणबाट: I-75 लिनुहोस् १२it बन्द गर्न (Corkscrew रोड)। कोर्कस्क्रू रोडमा पूर्व तिर लाग्नुहोस्। बेन हिल ग्रिफिन उत्तर लिनुहोस् र Arena बायाँ-हात पट्टि अवस्थित छ।
पार्किंग स्थल शुरु हुने समारोहको तीन घण्टा अघि खुल्छ।
वरपरको पार्किंग स्थलहरूमा हर्ट्ज एरेनामा पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध छ।
पार्कि forको लागि कुनै शुल्क छैन।
व्यक्तिगत चीजहरू ल्याउनको लागि हर्ट्ज नियमहरू ***** कृपया पढ्नुहोस्
हर्ट्ज अरेनासँग के कडा नियमहरू छन् र सुविधामा ल्याउन अनुमति छैन। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ ती नियमहरूको लागि, जुन कडाईका साथ लागू गरिनेछ।
अतिथिहरू :3:०० र 00::3० बीचमा आउँनेछ
र्गले खुला सीट प्रदान गर्दछ, कुनै टिकट आवश्यक पर्दैन।
अशक्त सिटिंग दक्षिण पक्ष स्ट्यान्डमा उपलब्ध छ। त्यहाँ व्हीलचेयर र केही स्वतन्त्र कुर्सीहरूको लागि खुला ठाउँ छ। एक पाहुना अपांग अतिथिसँग बस्न सक्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि बच्चा स्ट्रोलर, बेलुन, र फूलहरूलाई रंगशालामा अनुमति छैन। स्ट्रोलरहरू, बेलुनहरू, र फूलहरू हर्ट्ज स्टाफको साथ चेक-इन गरिनेछ र मुख्य डेस्कमा राखिनेछ र समारोह पछि लिन सकिन्छ।
एउटा छुट्टी स्ट्यान्ड अखालाको दक्षिणपट्टि खाना र पेय पदार्थहरूको लागि खुला हुनेछ।
अभिभावक, परिवार, र मित्रहरू बस्नको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ, समारोह छोड्दा उपस्थित सबैमा अत्यधिक अनादर प्रदर्शन गर्दछ।
कृपया याद गर्नुहोस् कि कसैलाई पनि मुख्य फ्लोरमा वा ऐसलेसमा तस्वीरहरू लिन अनुमति छैन।
एक पेशेवर फोटोग्राफर प्रत्येक स्नातक को गैर-बाध्यता फोटो लिनको लागि राखिएको छ।
फोटोग्राफहरू बसने ठाउँका परिवार र साथीहरूले लिन सक्छन्।
विद्यार्थी FAQ को स्नातक गर्दै
म मेरो आदर डोरीहरू लिन कहाँ जान्छु?
फोर मायर्स क्याम्पसमा पिक्चरका लागि सम्मान कर्डहरू उपलब्ध छन्, वा तपाईं आफ्नो साथी वा परिवारका सदस्यलाई डोरीहरू लिनका लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई सुरू दिनमा लिन सक्नुहुन्छ।
म मेरो डिप्लोमा कहिले लिन सक्छु?
होज स्नातकको रूपमा तपाईले दुवै डिजिटल डिजिटल डिप्लोमा र भौतिक डिप्लोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंको डिजिटल डिप्लोमा पहुँच गर्नका लागि निर्देशनहरू तपाईंको होज ईमेलमा पठाइने छ। तपाईको शारीरिक डिप्लोमा फाईलमा रहेको ठेगानामा पठाइनेछ।
यदि मैले स्नातक पृष्ठमा लिंक क्लिक गर्दा त्रुटि सन्देश प्राप्त गरिरहेको छु भने म कसलाई सम्पर्क गर्ने?
एकचोटि तपाईले स्नातक को लागी आवेदन गरे पछि स्नातक को लागी फार्म पूरा गरी, हाम्रो प्रणालीले तपाईलाई फेरि त्यसो गर्न अनुमति दिदैन। यो किन तपाईं त्रुटि सन्देश प्राप्त गर्दछ। यदि तपाईंले स्नातक फारम ईन्टेन्ट पूरा गर्नुभएको छैन भने, कृपया रजिस्ट्रार कार्यालयलाई २239--938- Reg7818१ contact मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा registrar@hodges.edu.
म कसरी स्नातक को लागी टिकट अर्डर गर्दछु? यदि मलाई स्नातक को लागी अधिक टिकट चाहिन्छ भने मैले के गर्नु पर्छ?
जब तपाइँले तपाइँको आशय गर्न स्नातक फारम पूरा गर्नुभयो, त्यहाँ उपस्थित हुने परिवार / साथीहरूको संख्या समावेश गर्न ठाउँ थियो। हामी स्नातक को लागी टिकट प्रिन्ट गर्दैनौं, तसर्थ यदि तपाईंसँग अतिरिक्त परिवार / साथीहरू छन् जो सहभागी हुन चाहानुहुन्छ भने, उनीहरू स्वागतका भन्दा बढि हुन्!
के म मेरो स्नातक टोपी सजावट गर्न सक्छु?
हामी तपाईंलाई आफ्नो क्याप सजाउन प्रोत्साहित गर्दछौं! कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् कि तपाइँको उपलब्धि को सबै उत्साह को प्रतिबिम्बित गर्न सजावट को हुनु पर्छ, तथापि, यो राम्रो स्वाद र आदरपूर्वक गरिनु पर्छ। कृपया याद गर्नुहोस् कि तपाईंको ट्यासल तपाईंको टोपीमा संलग्न हुनेछ - कृपया तपाईंको क्यापमा केहि पनि नराख्नुहोस् जुन तपाईंको टोपीमा टेस्सललाई प्रतिबन्धित गर्न सक्दछ.
के म स्नातक समारोह मा मेरो regalia उठाउन सक्छ?
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले स्नातक समारोह नगरेसम्म प्रतिक्षा नगर्नुहोला जबसम्म तपाईको रिगलिया छान्न / खरीद गर्न सक्नुहुन्न। हामीसँग आकारको अधिक सीमित दायराको साथ समारोहमा Regalia को एक धेरै सीमित मात्रा हुनेछ। सब भन्दा सुविधाजनक विकल्प तपाईको regalia मा कुनै पनि समय अर्डर गर्नु हो http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ तर अर्डर गर्ने अन्तिम दिन हो 21 सक्छ, 2021. विद्यार्थीहरूलाई समयमै डेलिभरी सुनिश्चित गर्नका लागि यस समयसीमा भन्दा अघि नै आफ्नो रिगलिया अर्डर गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
ग्रेजुएशन प्रश्नहरु को लागी म कसलाई सम्पर्क गर्छु?
रीगालिया (क्याप / गाउन) को लागि, मास्टर हुडहरू, Tassel, डिप्लोमा फ्रेम, कदर पिन, पूर्व छात्र पिन, स्नातक शुल्क, आदि, सहायक सेवाको कार्यालय सम्पर्क गर्नुहोस् (२239)) 938 7770-XNUMX०० वा universitystore@hodges.edu।
डिप्लोमा, सम्मान कर्ड, ट्रान्सक्रिप्ट्स (डिग्री दिए पछि), रजिस्ट्रार अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोस् (२ 239)) 938 7818-XNUMX१ or वा registrar@hodges.edu
जडित रहनुहोस्! #HodgesAlumni
होज्ज युनिवर्सिटी पूर्व छात्र नेटवर्क नेटवर्किंग र तपाइँको साथी Hodges Alum भेट्नका लागि जडित रहनको लागि तपाइँको मार्ग हो। त्यहाँ भाग लिनको लागि कुनै लागत छैन र एक सदस्य हुनलाई यति धेरै फाइदाहरू छन्। कुनै पनि ठेगाना र रोजगार परिवर्तन, र / वा व्यावसायिक उपलब्धिहरु को अपडेट कृपया Alumni नेटवर्क राख्नुहोस् ताकि हामी तपाईको सफलताहरु अरुहरु संग साझा गर्न सक्छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् alumni@hodges.edu। हालको ईमेल ठेगाना पूर्व छात्रों को सम्पर्क र पूर्व छात्र जानकारी को रसीद को लागी महत्वपूर्ण छ।